Doorashada Guddoomiyaha Faraca Degmada Dayniile – Hope Generation – جيل الأمل
Doorashada Guddoomiyaha Faraca Degmada Dayniile
Munaasabad si heer sare ah ay usoo agaasimeen qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Dayniile ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 10/03/2017 ka dhacday Dugsiga hoose dhexe iyo sare ee ITAAL ee isla Degmadaas.
Munaasabadda ayaa ku saabsanayd doorashada guddoomiyaha faraca degmada Dayniile ee ururka Jiilul Amal (Hope Generation), Waxaana kursigaas u tartamay si daahfurnaan leh Mudane Cabdifataax cali cabdalla “Imaamka” , Eng. Cabdifitaax salaad cali iyo Cabdiraxmaan Maxamed yuusuf, waxayna guushu raacday ugu dambeyn Mudane Cabdifataax cali cabdalla “Imaamka”.
Munaasabadda waxaa goobjoog kahaa Shaylilaah Guddoomiyaga Guud ee Ururka, Sayyidcali Maxada Xiriirka iyo warfaafinta iyo Maxamed Macalin Aadan Madaxa Xarunta Tababarada.
Faraca Degmada Dayniile waa Faracii 7-aad ee uu ururku ka Furo Gobolka Banaadir, waxaana kol sii horeysay u ururku furay faracyada kala ah: Yaaqshiid, Warta Nabadda, Kaxda, Dharkenley, Heliwaa iyo Hodan. Wuxuuna qorshuhu yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay fariinta ururka gaarto meel kasta oo ay dalka ka joogaan.